नारायणकाजीको भूमिकामाथि प्रमका सल्लाहकारकाे प्रश्न : नक्कली गीत नगाउनुस्, पदको लाज त जोगाउनु « News24 : Premium News Channel
नारायणकाजीको भूमिकामाथि प्रमका सल्लाहकारकाे प्रश्न : नक्कली गीत नगाउनुस्, पदको लाज त जोगाउनु
काठमाडौं, २३ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा रिमालले प्रवक्ता श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएकाे हाे ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रिमालले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मेन्सन गरेर ट्वीट गर्नुभएकाे छ । उहाँले ट्वीटरम लेख्नुभएकाे छ-‘इनफ इज इनफ नारायणकाजी श्रेष्ठजी ! कम से कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस् ।’
मुलुक संवेदनशील मोडमा रहेको भन्दै उहाँले पार्टी एकताविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि कतैबाट नहोस् भन्नुभएकाे छ । ‘विधि र पद्दति’को नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस् ! पार्टी एकताविरूद्धका कुनैपनि गतिबिधि कतैबाट पनि नहोस् ! मुलुक संवेदनशील मोडमा छ महसूस होस् !’
पछिल्लोपटक नेकपामा विधि र पद्धतिको लडाई भन्दै नेताहरुको कित्ताकाट हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।